Galmudug oo soo gabangabeysay doorashadii Xildhibaanada cusub - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Galmudug oo soo gabangabeysay doorashadii Xildhibaanada cusub
Galmudug oo soo gabangabeysay doorashadii Xildhibaanada cusub
December 12, 2016 admin227
Waxaa soo gabangaboobay doorashadii ka socotay magalaada Cadaado xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Galmudug.
Magaalada Cadaado oo kamid lixda xarun doorasho ee sanadkan lagu dooranayey xildhibaanada Aqalada Sare iyo Hoose, waxaana halkaan lagu doortay 44 xildhibaan (36 aqalka hoose + 8 aqalka sare), waxaa Galmudug kaalinta labaad ka gashay xaqiijinta qoondada haweenka 25% (9 aqalka hoose+ 2 aqalka sare), halka maamulka Hirshabeelle galay kaalinta koowaad xaqiijinta kaalinta haweenka 27%.
Magaalada Cadaado ayaa marti galisay loolankii ugu adkaa doorashada xildhibaanada Soomaaliya, waxaana doorashadan ka qeybqaatay 1860 ergay, 21 Duubabka dhaqanka ah, musharixiin kor u dhaafaya 200 iyo taageerayaal farabadan.
Dhanka soo dhaweynta waxa ay aheyd mid aad u sareysay, ciidanka ammaanka ayaa si aad ah u sugay nabadgalyada martida iyo xarumaha doorashada, waxaa musuq iyo riix siyaasadeed taas oo ay kala mid aheyd goobaha kale doorashada.
F.G: dhawaan la soco warbixino aan uga hadli doono xildhibaanada lagu doortay Cadaado iyo sheekooyin ku saabsan musuqa doorashada.
Sargaalkii Puntland ee Gaalkacyo lagu Qarxiyay oo Geeriyooday
Jawaari”Waa inaan ogaanaa tirada Ciidamada Shisheeye ee Dalka jooga”